MAXAAD TAHAY - Shanghai Formote Exhibition Service Co. Ltd.
FARSAMADA KHUDBADAHA NAGU SOO SAAR
RayWhite-Waxaan la kulanay saaxiibo farabadan oo danaynaya Australia bandhiggan. Waxaan si buuxda kalsooni ugu qabnaa una rajeyneynaa inaan laamo furanno oo aan galno suuqa Bariga China mustaqbalka dhow. Bandhigan ayaa si aad ah loogu guuleystay. Qabanqaabiyeyaasha bandhigan waa in lagu amaano maadaama ay cajiib tahay.
Keller Williams-OPI Expo waa goob u gaar ah shirkadaha caalamiga ah ee doonaya inay galaan Shiinayska. Guryahayaga waxaa taageeray dad badan oo iibsada guryaha Shiinaha, iyagoo na siinaya fursado ganacsi oo balaaran. Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadceliyo qabanqaabiyeha naga caawiyay ka dhigista ka qeybqaadashada bandhiggan mid guuleysta.
21 Qarniga-Thanks to OPI show waxaan awoodnay inaan u bandhigno howlaheena baaxadda ballaaran ee socdaalka dad aad u badan oo daneynaya iibsashada hantida Shiinaha. Dhanka kale, waxaan sidoo kale qabanay shir saxaafadeed guul leh oo aan ku qanacsanahay dhiirrigelinta lagu sameeyay dhacdadan.
LJ Hooker-Waxaan ka soo qeybgalnay Bandhig Maalgashi Soogalootiga Socdaalka Dibadda ah 3dii sano ee la soo dhaafay. Bandhigani waa kii ugu fiicnaa ee aan waligeed ka dhex qeyb galno Shiinaha. Marka la barbardhigo dhacdooyinka kale ee aan ka soo qeybgalnay, tayada macaamiisha leh himilooyin adag ayaa si muuqata halkan looga muuqdaa. Waxaan diyaar u nahay inaan la gaarno istiraatiijiyad muddo-dheer iskaashi lala yeesho qabanqaabiyeyaasha sanadka 2018.
DTZ-Dhowrkii sano ee la soo dhaafay OPI expo wuxuu isu beddelayaa tartan si rasmi ah u koray oo xiiso leh. Waxay muhiim u noqotay istiraatiijiyadda caalamiga ah ee warshadaha guryaha Mareykanka.
XUQUUQDA NOLOSHAADA EE DHAQANKA EE HEESTA SHANGHAI
Caqli ahaan · OPI Shanghai 2018 / Fall waxaa lagu qaban doonaa bartamaha wadnaha magaalada Shanghai.
Lujiazui Skyline: Soojiidashada Muuqaalada Magaalada Shanghai
KHUDBADKA EXPO WAA LAGA DHAQAN KARAA OO AAD U QAADAN KARTA, OO KA MID AH SHAQAALAHA aadka u sarreeya.
Waa marxalad aad u wanaagsan oo loogu talagalay in lagu muujiyo mashaariicaha dibedda laga keenay ee Shiinaha.
Lujiazui waxay si toos ah uga soo horjeeddaa Bannaanka dhinaca bari ee Wabiga Huangpu. Loogu talagalay degmada cusub ee dhaqaalaha ee Shanghai ilaa iyo horaantii 1990meeyadii, dhismayaasha caanka ah ee lagu arkaayay dariiqa cirka ayaa waxaa ka mid ah Oriental Pearl Tower, Jin Mao Dhismaha, Xarunta Bangiga Maaliyadeed ee Shanghai, Super Brand Mall, Shanghai IFC, Bank of China Tower iyo Dhismaha Shanghai.
TAAGEERADA HADDII MEDIA & SHAQAALAHA KA SOO JEEDA